Ebook Management Software — MYSTERY ZILLION
January 2012 edited January 2012 in Other
Calibri Ebook Management Software ကမြန်မာ font ကိုကောင်းကောင်း Support မလုပ်ဘူးဗျ။ Support ကောင်းကောင်း လုပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် တခြား အဆင်ပြေတာလေးများ ရှိသေးလား။ သိတဲံသူပြောပေးကြပါ။ Calibri Ebook Management Software အတွက် ကိုလူပျိုကြီးကို Credits ပေးပါတယ်။ သူ့ Blog ကနေသိခဲ့တာမို့လို့ပါ။
Thanked by2ofalolati nlmanaron
I also recommend Calibri. But I use iTunes to sync with iBooks. iTunes is ok and it's enough for me.
ကို zawlin ဖတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး စာအုတ်တွေကို Manage လုပ်ဖို့ပါ။ စာအုတ်တွေများလာလို့ Content Search လိုချင်လို့ပါ။
dtsearch ဆိုတာ စမ်းကြည့် ပါလား။ fulltext search ဆိုအဲ့တာ အကောင်းဆုံး လို့ထင်တယ်။ စာအုတ်များ လာရင် online search ကအလုပ်လုပ် မှာမဟုတ် တော့ဘူး။ index လုပ်နိုင်တာ တစ်ခုတော့ လိုလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် dtsearch မြန်မာ support ကဘယ်လောက် ကောင်းလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး။